MASIIBO: Ciyaartooyo Dhulku La Go’ay Oo Badbaadintooda Lagu Wareeray, Farriimo Qiiro Leh Oo Ay Soo Direen Iyo Dunida Oo Ka Walaacsan Sida Loo soo Saarayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
MASIIBO: Ciyaartooyo Dhulku La Go’ay Oo Badbaadintooda Lagu Wareeray, Farriimo Qiiro Leh Oo Ay Soo Direen Iyo Dunida Oo Ka Walaacsan Sida Loo soo Saarayo
(07-07-2018) Waxay dunidu ku dawakhsan tahay qaabkii loo badbaadin lahaa koox dhamaystiran oo uu wehelinayo tababarahoodii oo uu dhulku la go’ay wakhti ay ku jireen tababar, kuwaas oo muddo markii la’aa laga helay bohol weyn oo biyo ka buuxaan oo ay gunta hoose meel gebi ah ka laallaadaan.
Cayaartooyadan oo ay tiradoodu tahay 12 laacib oo kubadda cagta ah iyo macallinkoodii oo u dhashay waddanka Thailand ayaa quuseyaal godka galay ay bilowgii bishan soo arkeen iyagoo ka laallaada gebiga hoose ee god weyn oo biyo ka buuxaan oo la dumay, waxaana ay halkaas ku sugan yihiin kuddo 20 cisho ku dhow.
Muuqaallo ay dadka biyaha quusa kasoo duubeen ayaa waxay soo bandhigeen ciyaartooyada oo diciifnimo badan ka muuqato, hase yeeshee dhamaantood bad-qaba, balse waxa dawakhaad noqotay qaabka loo soo badbaadinayo, iyadoo biyaha godkaas ku jiraana ay sii badanayaan oo ay ku dhow yihiin inay soo gaadhaan halka yar ee ay fadhiyaan ciyaaryahannadan da’da yari.
Dawladda Thailand oo bishan oo dhan ku mashquulsanayd badbaadinta ciyaaryahannadan ayaa waxay muujisay walaac ah inay ka rajo dhigayso qaabka ay usoo saarayso wakhti biyuhuna sii badanayaan, hase yeeshee dhinaca kale quuseyaal Ingiriis ah oo markii ugu horreysay soo helay da’yartan oo la la’aa ayaa waxay iyaguna kari waayeen inay xattaa hal qof kasoo saaraan.
Dhinaca kale, ciyaartooyada ayaa farriin ay kasoo direen hogga ay ku jiraan waxay ugu sheegeen waalidiintooda in aanay werwerin, waxase ay geesta kale dalbadeen cunto.
Farriintan qiirada leh oo ahayd warqad lagu qoray qalin oo ereyo kooban ah ayaa waxay xambaarsanayd farriin kooban oo ay waalidiintood niyadda ugu dejinayaan iyo mid kale oo ka turjumaysay xaaladda adag ee ay ku jiraan.
Si kastaba ha ahaatee, sida uu xaalka ciyaartooyadani noqdo waxa aad kala socon kartaan shabakadda qalinkacayaaraha.com oo u heellan tebinta warar kasta oo ciyaaraha la xidhiidha.